महामारीमा शुद्ध तोरीको तेल हालेर गृहमन्त्री सुन्दैनन्: ढुंगो बोल्छ, गृहमन्त्री बोल्दैनन्
प्रकासित मिति : ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार प्रकासित समय : १३:१९
काठमाडौं,वैशाख,५ । राष्ट्रिय विपदका बेलामा संसारभरिका जनताले आफ्नो देशको गृहमन्त्रालयलाई सम्झन्छन् । घरमा पनि यस्तै हो, विपतमा आमालाई, अभिभावकलाई सम्झिइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि उभिएर ‘लु यसो गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू’ भन्ने एकमुठी साहस गृहमन्त्रीले देखाउन सकेका छैनन्। संकटका बेला नेतामा दुईवटा गुण चाहिन्छ – भिजन र ह्याऊ । बादलमा न कुनै ठोस भिजन देखिन्छ, न ह्याउ ।
त्यसो हो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किन राति–राति छापामार शैलीमा काठमाडौंबाट बाहिरी जिल्लामा गाडी चल्ने छुट दिए त ?किन लकडाउनमा पनि राति–राति मानिसहरुलाई घर जानबाट रोकिएन ? के दिउँसो घर जाँदा कोरोना सल्कने, राति जाँदा जोगिने गृहमन्त्रालयको ठहर हो ?
विडम्वना १ अहिले पनि विपन्न वर्गका मानिसहरु बालबच्चा बोकेर भोकै र तिर्खै राजधानीबाट गाउँतिर पैदल हिँडिरहेका छन् । लाचार गृहमन्त्रालय न लकडाउनको पालना गराउन सक्छ, न त उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ ।
चैत २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा एउटा सूचना आयो– ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि (चैत २८ र २९ गते) काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले या त उनीहरुलाई काठमाडौंमै बस्न सहमत गराउनुपर्‍यो, या कुनै विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर घरसम्म जान दिनुपर्‍यो।
२.त्यसरी संकलित सूचीमा रहेका मानिसहरुको डेरासम्म तत्कालै पुगेर उनीहरुको वास्तविक समस्या वा मनोदशा पत्ता लगाउने, लकडाउनभरि राजधानीमै बसिदिन कन्भिन्स गर्ने, भौतिक समस्या छ भने तत्कालै राहत उपलब्ध गराइदिने र थप समस्या परेमा महानगरपालिकाको वडामा नियमित सम्पर्क गर्न भन्ने ।
त्यसरी लैजाँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकोल पूर्णरुपमा पालना गर्नेरगराउने । जस्तै– बसमा चढाउनुपूर्व सबैजनाको र्‍यापिड टेस्ट गर्ने र पोजेटिभ देखिएकालाई जान नदिने । ज्वरो आएकाहरुलाई जान नदिने । मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने । भीडभाड नगर्ने ।
तर, यसरी मानिसहरुलाई गाउँमा पठाउँदा सुगममा त ठीकै होला, हिँडेर जानुपर्ने पहाडका दुर्गम ठाउँसम्म सुरक्षाकर्मीले मानिसहरु पठाउन गाह्रो पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
अन्त्यमा, फेरि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि प्रश्न– तपाई अझै यसैगरी लाचार भएरै घुम्ने मेचमाथि बसिरहनुहुन्छ या केही सोच्नुहुन्छ?
कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ, योबेला बिचरा गृहमन्त्रीलाई किन भन्ने ? मुखियाहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई पो भन्नुपर्छ त । उनीहरुलाई पनि के भन्ने? प्रधानमन्त्री ओली सुकुम्बासी आयोग गठनतिर भुलेका छन्, नयाँ बन्न लागेका सुकुम्बासीबारे सोच्ने फुर्सद छैन । प्रचण्ड पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्षको हैन, पियनको भूमिका निभाउँदैछन् ।